Rugby – Lalao fihantsiana: ho avy hanafika ny Makis ny Oxford University | NewsMada
Rugby – Lalao fihantsiana: ho avy hanafika ny Makis ny Oxford University
Hampiantrano lalao iraisam-pirenena indray ny baolina lavalava malagasy. Fantatra mantsy fa hanafika ny Makis de Madagascar ny mpianatra avy amin’ny oniversiten’i Oxford, any Etazonia.
Handalo eto Madagasikara ireo mpianatra mpanao rugby avy amin’ny oniversiten’i Oxford, Etazonia. Nangataka hanao lalao firahalahiana sady fihantsiana amin’ny Makis de Madagascar ry zareo. Neken’ny tomponandraikitra eo anivon’ny Malagasy rugby izany ka fihaonana indroa miantoana ny hatao amin’izany: ny 11 sy ny 23 septambra ho avy izao. Manana ny lazany any Etazonia ity ekipan’i Oxford University ity ary vaventy sy matanjaka. Fantatra fa hanomboka amin’ny tapatapak’ity volana aogositra ity ny fampivondronana ireo mpilalaon’ny Makis, halaina avy amin’ireo ekipa ao anaty rafitra ara-dalàna, araka ny nambaran’ny Malagasy rugby.
Mandra-piandry izany, fantatra fa hotanterahina, ny faran’ny herinandro ho avy izao etsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina, raha tsy misy ny fiovana, ny lalao manasa-dalana, hiadiana ny “Amboaran’ny filoha”. Hifandona amin’izany ny Savony (STM) sy ny FTBA Andohatapenaka ary ny FTM, hifanazava amin’ny Cosfa.
Hanasazy ny Malagasy rugby
Nambaran’ny filohan’ny Malagasy rugby, Rakotomalala Marcel, fa talanjona izy mahita afisy hafa, mifanitsaka amin’ity fihaonana ity, izay efa 58 taona ny nisiany, ary lalao azo lazaina fa faratampony, saika ataon’ny firenena rehetra toy ny fiadiana ny “Amboaran’ny mpanjaka” any Espaina sy ny hafa. Manoloana izany, nandefa taratasy eny anivon’ny prefektiora sy ny kaominina ary ny tribonaly izy ireo ho fampahafantarana fa tsy ara-dalàna io lalao io kasain’ny sasany hatao io. Na izany aza, hiala nenina, hanatona an-dramatoa ben’ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra, ny Malagasy rugby, hanazava ny zava-misy marina eo anivon’ny taranja rugby. Toy izany koa ny fihaonana amin’ny minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena, hijery akaiky sy hamoaka izay fanapahan-kevitra amin’ity raharaha ity. “Raha tsy misy ny vahaolana ka mbola mikiry hanatontosa izany lalao izany ireo mpikarakara, tsy maintsy handray fepetra henjana sy mifanandrify amin’izay tokony ho izy ny Malagasy rugby”, hoy hatrany Rakotomalala Marcel.
Farany, nanambara mazava ny filohan’ny Malagasy rugby fa tsy manohana olona na antoko politika ny Malagasy rugby ary, indrindra ny taranja rugby fa miara-miasa hatrany amin’izay mpitondra mitondra eo, toy izay efa natao hatramin’izay, ny federasiona. “Marina fa nisy fotoana mpanolotsain’ny praiminisitra ny tenako, fa tsy HVM velively. Tsy tokony hisy olona, noho izany, hiteny hoe manohana an-dRakoto na an-dRabe amin’ny alalan’ny taranja rugby eto. Hisy ny sazy hahazo izay mandika izany araka ny lalàna sy ny andalana mifehy ny fitsipika anatin’ny Malagasy rugby”, araka ny nambarany.